Soo celinta canon Windows | Laga soo bilaabo Linux
Guillermo | | Casharrada / Buugaagta / Talooyinka
3 Geedi socodka ayaa la raacay: Talaabooyin
4 Macluumaadka sharciga
8 sano ka hor waxaan iibsaday Laptop-ka nooca loo yaqaan 'clone laptop' oo aan lahayn Windows horay loo rakibay si loo rakibo GNU / Linux anigoon wax lacag ah ka bixin Microsoft, in kasta oo ay sii wadato shaqadeeda, hadana waxaan horey u soo iibsaday laptop cusub Dhibaatadu waxay tahay in hadda aysan ficil ahaan u iibinin kombuyuutarrada gacanta, dhammaantood waa la calaamadeeyay oo Windows horay ayaa loo sii rakibay.
Bogga internetka qaarkood waxaan awooday inaan ku arko in dadka qaar ay heleen celinta canshuurta Windows, qaab fudud oo leh astaanta Asus: http://rocknlinux.blogspot.com.es/2013/06/devolucion-de-la-licencia-windows.html
Kaydinta ma aha wax yar, waa 42 euro oo loogu talagalay Windows 8 taas oo ku xidhan qiimaha laptop-ka waxay noqon kartaa qiimo dhimis 10%:
Qiimaha Laptop-ka ee Bakhaarka: Boqolleyda Dhimista ee Windows-ka
Laptop 400 euro: 42/400 = 10,5%
Laptop 500 euro: 8,4%
Laptop 600 euro: 7%
Soo-celinta waa inay sidoo kale u adeegtaa dhammaan kuwa iibsaday laptop-ka jabay, waxay dib u cusbooneysiin karaan Windows iyagoo adeegsanaya liisankoodii hore illaa iyo inta aysan ahayn OEM (gaar u ah kombuyuutarka lagu iibsaday), kuna laabo Microsoft Windows-ka liisanka kombiyuutarka cusub, kaas oo ay si fudud ugu baahan yihiin inay helaan CD rakibid ama USB ah isla nooca Windows ee ay leeyihiin (sida caadiga ah 64-bit Home Edition) si ay u soo galaan lambarkooda liisanka.
Si kastaba xaalku ha ahaadee, waa inaysan shidan kombiyuutarka cusub si aysan u aqbalin heshiiska shatiga ee soo ifbaxaya markii ugu horreysay; maadaama badhan la joojinayo uusan muuqan, kaliya waxaa harsan in la damiyo qalabka:
Kahor intaadan usoconin inaad soo celiso liisanka Windows-ka, waxaa fiican inaad ka shubto nidaamka GNU / Linux CD ama USB qaabka tooska ah si aad u aragto haddii qalabka oo dhan (qalabka) shaqeynayo iyada oo aan la isbarbar dhigin: kaarka sawirada, dhawaaqa, webcam (webcam) ), USB ama Wi-Fi printer, scanner, iwm. Haddii kale waxay had iyo jeer kombuyuutarka ku celin karaan bakhaarka gudahooda 7 maalmood laga bilaabo taariikhda qaansheegta iibsiga.
Geedi socodka ayaa la raacay: Talaabooyin
Sidii aan soo sheegay, ka dib markii aan baaray internetka waxaan arkay in Asus uu yahay midka caqabadaha ugu yar geliya soo noqoshada Windows, waana sida ay ahayd: ka dib dhowr emayl iyo seddex isbuuc oo sugitaan ah, waxaan horeyba ugu haystay koontadayda 42 euro . Halkaan waxaan uga tagayaa fariimaha, taariikhaha iyo dukumiintiyada ay i weydiisteen inta howsha socoto:
Ku billow dirista farriinta bogga Asus: https://vip.asus.com/VIP2/Services/QuestionForm?lang=en-us&_ga=1.125266755.850080518.1425564409#
Farriintaydu markay ahayd 21-kii Abriil, 2015 waxay ahayd (xogta shaqsiyeed waa la beddelay):
Taariikhda dalabka: 2015/04/21 17:49:17 (UTC Time) [Macluumaadka xiriirka] Magaca: AAAA BBBB CCCC
Cinwaanka emaylka: abcd@abcd.es
Dalka: Spain [Spain] [Macluumaadka wax soo saarka] Nooca alaabta: Buugga xusuus-qor
Habka wax soo saarka: F554LA
Nambarka taxan ee alaabta: EXX000000XX1
Goobta iibsiga: PCBox Córdoba
Taariikhda iibsiga: 2015/04/21
Nidaamka qalliinka: Win2008 64bit [Sharaxaadda dhibaatada] Waxaan rabaa inaan soo celiyo liisanka Windows-ka maxaa yeelay waxaan rakibayaa GNU / Linux
Sida iska cad wax aan macquul aheyn, jawaabtiisa otomaatiga ah waqti dheer kuma qaadan in la yimaado isla maalintaas (21/04/15 19:49 PM) oo leh xiriir si loo arko jawaabtiisa 48 saac ee soo socota:
Gacaliyeyaal Isticmaalayaasha Alaabta ASUS,
Aad baad ugu mahadsantahay doorbididaada alaabada ASUS.
Lambarka dhacdada ayaa ah WXXX20150422000000000
Waxaan helnay e-maylkaaga waana falanqeyneynaa. Waxaan isku dayi doonaa inaan kuugu jawaabno ugu badnaan 48 saacadood gudahood (shaqeynaya). Adeegyadeena waxaa la heli karaa Isniinta ilaa Jimcaha, laga bilaabo 9 subaxnimo ilaa 18 galabnimo. Haddii aadan jawaab ku helin muddadan gudaheeda, fadlan kafiiri sanduuqa sanduuqaaga ASUS ama ka hubi xiriirka hoose. Waad ku mahadsantahay la xiriirka ASUS Ibérica.
(Fadlan eeg jawaabtooda farsamo ee xiriirka kore.)
Xarunta Adeegga Macaamiisha ee ASUSTeK
Si aad jawaabtan u gasho, waa inaad iska diiwaangelisaa degelkeeda (21/04/15 19:53 PM):
Waad ku mahadsan tahay abuurista koontada isticmaale ee ASUS. Si loo xaqiijiyo shaqada saxda ah ee cinwaanka emaylka ee la bixiyay (abcd@abcd.es), fadlan raac tilmaamaha hoose:
Halkan guji si loo dhammaystiro diiwaangelinta
Haddii xiriirka kore uusan shaqeyn, fadlan koobi oo ku dheji cinwaanka soo socda bogga cinwaanka cinwaanka biraawsarkaaga oo buuxi nidaamka xaqiijinta.
Jawaabtu waxay iigu timid emayl maalintii xigtay. Xaqiiqdii waad bilaabi kartaa geedi socodka soo celinta liisanka oo dhan si toos ah adoo raacaya tilmaamahan:
Macaamiil qaali ah, dib u noqoshada liisanka Windows, waxaan u baahan nahay inaad noo soo dirto emaylka: acib_callcenter2@asus.com (ku muuji mawduuca emaylka lambarka taxanaha ah ee qalabkaaga):
Sawirka Windows sticker
Sawirka nambarka taxanaha ah ee ku yaal dhabarka qalabka.
Sawirka nambarka taxanaha ah ee ku yaal kaarka damaanad qaadka.
Waad ku mahadsantahay xiriirka aad la leedahay ASUS Ibérica.
Dukumiintiyada waxaa loo diray sida ay ku arkeen sawirada la iskaankayay: qaansheegasho, dammaanad nambarka taxanaha ah, sawirada gadaal leh nambarka taxanaha ah iyo warqada Windows 8
E-mayl cusub ayaa ii soo sheegaya maalinta xigta ee helitaanka dukumintiyada iyo isgaarsiintooda waaxda u dhiganta (23/04/15 09:34), waxaan sugayaa:
Macaamiil qaali ah,
waxaan si sax ah u helnay dukumiintiyada la codsaday, waxaan u gudbinay isgaarsiinta waaxda u dhiganta.
Waan kula soo xiriiri doonaa sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah illaa aan ka helno wax xiriir ah oo ku saabsan mooyee.
Fariinta soo socota ee Asus (23/04/15 11:18 AM), waxay ii soo direen laba lifaaq si aan u buuxiyo una saxeexo, mid faahfaahinta bangiga halka laga helayo wareejinta soo celinta, iyo mid kale oo ku saabsan soo celinta rukhsad siinta Microsoft; Waxay mar labaad i weydiisteen sawirada damaanada lambarka taxanaha ah iyo qaansheegadka.
Dukumiintiyada laxiriira soo celinta Microsoft OS / Office liisanka ayaa ku lifaaqan. Fadlan si taxaddar leh u aqri oo buuxi labada foom oo macluumaadka looga baahan yahay ku jira.
Markii aad dhamayso oo aad xaqiijiso, waa inaad ku soo dirtaa dukumiintiyadan saxeexa ah emayl.Haddii aad haysato DVD-yada OS Recovery, ku soo lifaaq oo u dir cinwaanka hoos ku xusan.
Xaalada haysashada nidaamka Windows 8, u soo dir dukumiintiyada lagu daray, iskaan oo saxeexay kombiyuutarka iimaylka.
C / Plomo, 5-7, dabaqa 4aad
Wixii su'aalo ah waxaad kala xiriiri kartaa khadka taleefoonka 902 889 688 ama acib_calcenter@asus.com o acib_calcenter2@asus.com
Muhiim ah: -Waa inaad dirtaa dhamaan dukumiintiyada la daabacay oo si sax ah loo dhammeeyay tan iyo haddii mid la waayo ama ay jirto macluumaad aan sax ahayn, ayaa la yiri dokumentiga waa la soo celin doonaa.
- Xusuusnow sidoo kale in magaca qaansheegtu ay ahaato mid la mid ah kii lagu buuxin jiray foomamka.
Dukumiintiga wareejinta bangiga:
Iyo foomka soo celinta shatiga:
Saddex toddobaad ka dib waxaan helay lacagtii bangiga ee lacagta, anigoon wicin taleefan:
Si loo soo gabagabeeyo: iibinta ku xiran lama mamnuucayo se, laakiin waa mamnuuc in la xakameeyo tartanka.
Sharciga 15/2007 ee Difaaca Tartan in uu maqaalka koowaad anshaxa mamnuuca ah:
1. Heshiis kasta waa mamnuuc, go'aan wadajir ah ama talo, ama dhaqan wada jir ah ama si miyir qab ah u barbar socda oo ujeeddadiisa leh, soo saaraya ama soo saari kara saameynta ka hortagga, xaddidaadda ama qalloocinta tartanka dhammaan ama qayb ka mid ah suuqa qaranka iyo, gaar ahaan, kuwa ka kooban:
d) Codsiga, ee kujira cilaaqaadka ganacsiga ama adeegga, oo leh shuruudo aan sinnayn oo loogu talagalay adeegyo u dhigma taas oo ka dhigaysa qaar ka mid ah tartamayaasha faa'iido darro marka loo eego kuwa kale.
Iyo in maqaalka labaad:
Qodobka 2aad. Ku xadgudubka jagada ugu weyn.
1. Ku takrifal xadgudub ah oo ay ku kacaan shirkad ama in ka badan oo shirkadeed oo ka mid ah kuwa ugu awoodda badan waa mamnuuc dhammaan ama qayb ka mid ah suuqa qaranka.
2. The xadgudubku wuxuu ka koobnaan karaa gaar ahaan, gudaha:
c) Diidmada aan cudurdaarka lahayn ee lagu qancinayo dalabaadka ah in alaab la iibsado ama adeeg la bixiyo.
Sidaa darteed, haddii Microsoft aysan oggolaanayn in shatiga dib loo celiyo, waxay noqonaysaa mid jabinaya sharcigan, iyo astaamaha kumbuyuutarrada ee aan oggolaanayn soo celinta ma fulinayaan sidoo kale. Si kastaba ha noqotee, inta udhaxeysa diidmada ama diidmada, waxaa jiri kara dhaqano looga dhigo macmiilka inuu ka waantoobo, sida inuu kugu qasbo inaad kumbuyuutarka u dirto xaruntooda Madrid ama Barcelona si ay u tirtirto nidaamka qalliinka, ama kugu qasbo inaad u dirto dukumiintiyada adigoo warqad la xaqiijiyay, oo xambaarsan kharash badan.
Si kastaba ha noqotee, maadaama ay tahay qadar yar, maxkamadaynta wax kharash ah kuma lahan macaamilka, oo saddex nuqul oo ah sheegasho qoraal ah oo ka dhan ah Microsoft ayaa loo soo bandhigi karaa Maxkamadda Heerka Koowaad.
In kasta oo aan haysto Asus, waxaan kugula talin lahaa in laga fogaado in maxkamad la aado.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Soocelinta canon Windows
Xiiso leh, laakiin Dell muddo dheer waxay iibinaysay Laptops-ka Ubuntu horay loo sii rakibay, HP ilaa Toshiba waxay iibinayaan laptops-ka yimaada OS la'aantiis sidaa darteed waad rakibi kartaa GNU / Linux distro-ka aad doorbideyso.
Ma aqaano sida ay noqon doonto Spain, laakiin Peru, iibinta laptop-yada aan Windows-ka horay loo sii rakibin durba waa run.
Kumbuyuutarrada illaa hadda aan ka soo arkay Dell ama noocyo kale oo kuu oggolaanaya inaad doorato Windows la'aanteed, ma ahayn oo keliya inaysan u malaynaynin in lacag la badbaadin karo iyadoo aan la socon Windows la'aan laakiin sidoo kale way ka qaalisan yihiin. Markii laga faallooday boggaga internetka ee mawduucan, qaar yar baa soo baxay kuwaas oo dhahay magacyadu waxay bixiyeen qayb kambuyuutarka ah oo loogu talagalay xayeysiinta iyagoo keenaya barnaamijyadoodii horay loo rakibay: tusaale ahaan, antivirus-ka horay loo sii rakibay ayaa wax ka bixin doona qalabka. Ama, isla qiimahaa, kumbuyuutarkii GNU / Linux ahaa ayaa lagu jaray qalab, markaa way fiicnayd in la iibsado oo lagu bixiyo kombuyuutarka ruqsadda Windows xitaa haddii aad mar dambe qaabayso.
Ku jawaab gmolleda
Way fiicantahay inay adiga kuu shaqeysay, in kasta oo ay wali xoogaa caqabad ah ku jirto. Waxaan la yaabanahay haddii wax la mid ah lagu qaban karo Chile… in kastoo aanan rajo badan qabin.
Ugu yaraan halkan Asus wali wuxuu iibiyaa dhowr nooc oo aan lahayn OS ama Ubuntu.
Haddii tusaalaha ay kaa iibinayaan adiga oo aan lahayn qalliin uu leeyahay qalab la mid ah kan leh Windows-ka (waxba ma goynayaan) iyo kala duwanaanta qiimaha (ka jaban kan bilaa software) waa qiyaastii kalabar iibsashada liisanka OEM (marka aad soo iibso kumbuyuutar desktop ah oo aad weydiisato ruqsad Windows ah oo horay loogu sii iibiyey kombiyuutarka), ka dibna iibso kan Linux-ka ah.
Gudaha Isbaanishka, markay iibinayaan laptop aan lahayn qalliin ama GNU / Linux oo horay loo sii rakibay, midkoodna malaha ikhtiyaarrada qalabka ee yar, ama aad ayey qaali u yihiin.
Xaaladdayda. Kahor intuusan ahayn shardigaas (Linux kaliya Linux). Maanta waxaan la noolahay nidaam kasta oo shaqeynaya. Xaqiiqdii, waxaan iibsaday liisanka Windows 8.1 oo waxaan ku rakibay nidaamka kombuyuutarka dusha sare. Waan qiimeynayaa liisankaas maxaa yeelay waxay ii oggolaaneysaa inaan si sharci ah u adeegsado Windows-ka. Waan ku raaxeystaa Windows-ka waxaanan u imid inay ku fiican tahay wax soo saarkeeda. Waxaan qabtaa shaqada xafiiska, Windows-na wuxuu si fiican ula jaan qaadayaa dhammaan qalabka iyo aaladaha aan haysto oo aan iibsan karo. Waxaan maanta u adeegsadaa Linux noloshayda websaydhka badan, way ka ammaan badan tahay, ka kalsooni badan tahay, runtiina waan jeclahay.
Ta labaad, waxaan u arkaa inay tahay heshiis aad u wanaagsan inaan ku helo liisanka Windows keliya € 40. Xaaladdayda, waxaan ku iibsaday liisankayga USD $ 92.00 wayna kordhay ku dhowaad boqol doolar iyada oo kharashyada qaarkood lagu daray. Windows-ka horay loogu rakibay laptop-yada iyo desktops-yada ayaa laga yaabaa inay ka jaban yihiin. Waa waxa kaliya ee aan ka fikiri karo. Si kastaba ha noqotee, waxaan u arkaa inay waxtar weyn u tahay dhammaan dadka isticmaala Linux inay haystaan ​​liisanka Windows, xaaladaha qaarkood waa laga maarmi karaa.
Haddii aad u baahan tahay MS Windows barnaamijyada qaarkood ee shaqadaada, oo aysan jirin wax kale oo tayo leh, markaa adiga ayaa kuu fiican. Laakiin haddii baahidu ka bilaabato oo keliya soo rogitaanka Maamulka Dawladda, waa iska cadahay inaadan haysan ikhtiyaar aan ka ahayn inaad bixiso shatiga laakiin waa inaad u sameysaa foom cabasho Maamulkaaga ah si ay ugu hoggaansamaan heerarka maxaa yeelay waxay xaddidayaan tartanka. Adiguna, miyaadan ka mudaaharaadin cunsuriyada macquulka ah?
Waxa aan ku iri fariinteydii hore: Waxaan joojiyay inaan noqdo Ultra-Linux, si aan u noqdo isticmaale gebi ahaanba wax qabad leh oo XOR AH. Waxaan haystaa ruqsad Windows ah, waxaan u isticmaalaa iPhone-ka taleefanka gacanta, waxaanan ku dhex wareegayaa shabakadda kumbuyuutarradeyda Linux. Mid kasta oo ka mid ah barnaamijyadan waxay i siinayaan xoogaa faa'iido ah isticmaale ahaan. Amniga Windows kaama badna Linux. Isticmaalka, xasiloonida, xawaaraha iyo tayada (sidaan qabo) Android wali kama badna Apple. Marka laga hadlayo iswaafajinta qalabka / softiweerka marka la dhisayo goob shaqo oo dhinacyo badan leh iyo qaar ka mid ah softiweerrada takhasuska leh, Linux lama barbardhigi karo taas, mana gaarto Windows-ka qeybta Desktop-OS.
Waxaa jira marxalad uu qofku ku qanacsan yahay barnaamijka bilaashka ah. Marxalad uu qofku uga careysan yahay "ku-soo-riixitaanka" suuqa iyo nidaamka. Marxalad uusan qofku dooneynin inuu isticmaalo kaliya xalka bilaashka ah ama Source Source, laakiin mid wuxuu ku dadaalayaa inuu isticmaalo kaliya barnaamij bilaash ah ama Source Source. Markaa qofku wuu dejiyaa, midna wuu degaa. Xaaladdayda, waxaan nasiib u helay in qofka aqoonta ugu badan u leh Unix iyo Linux ee aan la kulmay (Qof loo tababaray Red Hat) uu yahay shaqsi ka tagaya Linux PC una tagaya laptop-ka Windows 7 isaga oo aan wax dhibaato ah qabin, oo adeegsada laba madal oo aan cuqdad laga qabin, in kasta oo si qoto dheer loogu bogaadinayo horumariyeyaasha Linux.
Haddii aad si fiican u fiirsato, oo aadan wakiil ka ahayn urur kasta oo qarsoodi ah, isweydaarsiga isticmaalka kombuyuutarka inta u dhexeysa barnaamijyada kala duwan ayaa kuu oggolaanaya inaad marin u hesho midba midka ugu fiican, taas oo, ka fog xaddidaaddaada, ballaarinaysa fursadahaaga isticmaale ahaan. Waa waxa aan sameeyay. Isticmaalka kaliya Linux (adigoon u arkin faa iido dhaqaale ama mid bulsho) ayaa kugu xadidaya.
Aniguba sidaada oo kale ayaan ahay, oo isticmaalka Windows ama Mac dhib malahan aniga haddii aan u baahdo. Laakiin waxaan rabaa inaan uga tago adduun ka wanaagsan jiilalka soo socda, taasi waa sababta waxa kaliya ee aniga igaga duwan ay tahay inaan dhigo waraaqaha cabashada ama soo jeedinta markii wax ka xun si dabiici ah naloogu soo rogo. Maamulka Dawladdu waa inuu ahaadaa mid dhexdhexaad ah, sida muuqata haddii uusan ahayn, waxaan adeegsadaa wixii ay igu soo rogaan, laakiin waan diidanahay. Haddii halkii aan keli ahaan mudaharaadi lahaa, qof kastaa mudaharaaday, adduunku wuu u fiicnaan lahaa jiilalka soo socda. Dibadbaxa maanta, buuxinta foomamka khadka tooska ah wax kharash ah kama badna 5 daqiiqo oo waqtigaaga ah. Ma aha jagooyin aan is-qaadan karin: pragmatism iyo u dagaallanka adduun wanaagsan.
Hubaal inaadan isku dayin Android Lollipop on Nexus 5 ama 6. Waxaan ku tijaabiyay Galaxy 6 Edge cusub, hadaad eegto qeexida HW marka la barbar dhigo Nexus 5, nidaamku uma fiicna sida Nexus 5 .
HAA, way fududdahay inaadan ku xukumin akhlaaqda waxyaabaha. Way fududahay inaadan ka fikirin dil, dagaal, addoonsiga, wasakheynta deegaanka ama sinnaan la’aan dhaqaale. Dhamaadka maalinta noloshu waa sidaas oo kale waxna isma beddeli doonaan, waxaan sifiican u ilaalinayaa raaxada, way fududahay (sarcasm).
Dhanka kale, sifiican isuma barbar dhigaysid xorriyadda doorashada iyo xorriyadda barnaamijka, maxaa yeelay waxay ku hoos jiraan xaalado kala duwan.
Ku jawaab laper
Way ka jaban tahay daaqadaha gurigooda dartiis. Aynu noqono ujeeddo: Xafiiska, ku xirnow RedHat? maahan inay maamusho kumbuyuutarrada, kooxaha ama adeegsadayaasha shabakadda, kumana jiraan awoodda domain. Waxaan jeclaan lahaa wadankeyga in u dhigma 40 euro la soo celiyo. Qaarkeen ayaa heli kara rukhsadaha jaamacadda ama shaqada. Xitaa Microsoft waxay bixisaa ruqsadaha iyada oo loo marayo MSDNAA / Dreamspark haddii aad mashruuc u haysato tikniyoolajiyadooda.
Walaalkeey dhawaan wuxuu iibsaday laptop-ka calaamadda ay keento waxay sheegeysaa in laga caddeeyay linfus Linux in isaga ay ku baxday 1.200.000 Colombian pesos waxaanan u maleeyay inay jaban tahay sababtoo ah astaamaha uu keenayo darteed, waa u qalantaa wax ka badan ama ka yar 1.600.000 maxaa yeelay waa xuddun i5 Jiilka shanaad 8 gb wan iyo hal tera disk oo iska cad inuu isagu rakibay daaqadaha 7 oo dhan, halkan Colombia waxaa ku yaal dukaanno lagu iibiyo kombiyuutaro linux ah ama leh daaqado sidan oo kale ah
Ku jawaab kookaha
Wanaagsan inaad la wadaagto khibradaada, waxaana rajeynayaa markhaatigani inuu u adeego inuu joojiyo fikradaha qaldan ee aysan macquul aheyn in laga dalbado inaysan si xoog ah noogu iibinin wax aanan weydiisan, iyo in haddii aad ka saarto Windows kombiyuutarkaaga lumiyaa dammaanad.
Qaar ka mid ah talooyinka dheeraadka ah ee ku badbaadin kara talaabooyinka qaarkood ayaa ah inaad la xiriirto shirkadda ka hor intaadan iibsan oo aad wax la iibsato shirkadaha wakiillada tooska ah ku leh magaaladaada.
Hambalyo qoraaga maqaalka.
Waad salaaman tahay, waa inaad ogaataa inaysan sharci darro ahayn in la iibiyo alaabada lala xiriiriyo dadka kale xitaa haddii aadan weydiisan, haddii aad iibsato aqbalitaan waa inaad u dulqaadataa. Dhibaatada halkaan ka jirtaa waxay tahay iyadoo is barbar socda dhamaan shirkadaha suuqa jooga inay kugu xiraan isla sheyga sidaa darteedna xor uma ahan inaad dooratid mid kale. In kasta oo halkan Isbaanishka ay jiraan qaybo si gaar ah loo nidaamiyay oo iibka isku xidhka ah ee alaabooyinka qaarkood la mamnuucay: caymiska guryaha isla bangiga aad ka codsato moorgeejku, ku soo rogo guri gaar ah oo duug ah oo magaalada ah caymiskaaga aaska.
Waxaan u maleynayaa inaanan sifiican u sharixin. Markaan idhaahdo: "ku iibi xoog BY wax aanaan weydiisan" Waxaan ula jeedaa inay kaa iibinayaan xitaa haddii aadan aqbalin, haddii aad aqbasho, hadda xoog kuma ahan.
Si buuxda ayaan kuu fahmay, waxaan u cadeeyay si looga fogaado isfaham la’aanta akhristayaasha mustaqbalka.
Waxaan rabaa inaan kuu hambalyeeyo sidoo kale waad ku mahadsan tahay inaad la wadaagto macluumaadkan, wax fikrad ah kama qabin in waxaas oo kale la qaban karo. Ogaanshaha xuquuqdeena waa dariiq loo madax bannaanaado, kuwa ugu sarreeya waxa ugu sahlan ee iyaga ku habboon waa dadka la wargaliyay, tani waa waxa dib noogu celiya awoodda.
Waxaan la yaabay faallooyinka, waxay umuuqataa in kuligeen aan u fahmin tan falsafad loogu talagalay nolol tayo fiican nolosha inta ay leegtahay ama aad tahay.
Run, badankood waa sidaas oo kale, waxay aqbalaan inay ku hoggaamiyaan jidka su’aal la’aan. Waan fahamsanahay adoo ku soo rogaya iibsashada liisanka si aad ula shaqeyn karto Maamulka ama suuqa, markaa ma lihid xulasho; laakiin in la difaaco iibsashadaas halkii aad ka xanaaqi lahayd oo aad ka mudaaharaadi lahayd gebi ahaanba macno aan macquul ahayn oo lagu soo rogay, maya Laakiin waxaa jira kuwa kale oo badan oo aqlabiyaddu aqbalaan oo xitaa difaacaan: Ku soo rogida luqadda Ingiriisiga oo ah luqad caalami ah halkii aad isticmaali lahayd Esperanto (eeg warbixinta Grin - Professor-ka Dhaqaalaha Luqadda - oo ku saabsan keydka dhaqaale ee Esperanto uu ku keeni doono oo keliya Midowga Yurub: 25000 bilyan oo euro sanadkii). Aadanaha waa xayawaan soojiidasho leh oo leh caadooyin go'an.
Haddii taas lagu samayn lahaa El Salvador way fiicnaan lahayd, laakiin haddii aad rabto inaad ku beddesho SO qaab wax yar ka badan oo rasmi ah
Ku jawaab Roberto Mejia
SU'AAL MUHIIM AH: ASUS ma bixisaa dammaanad laptop-kaaga adoo ku rakibaya nidaam ka shaqeeya oo aan ka ahayn Microsoft Windows?
Aad u xiiso badan, waad ku mahadsan tahay maqaalka.
Ka jawaab madax
Aynu aragno, cidina kama qaadi karto damaanad-qaadkaaga qalabka ah ee beddelaya barnaamijkaaga illaa inta software-ka uusan ahayn midka saameeya qalabka. Waxa dhacaya ayaa ah inaad ogaato wax ku filan oo aad ku xaqiijin karto in haddii ay wax dhacaan, ay runtii tahay qaladka qalabka ee aysan ahayn in barnaamijkaaga si sax ah uusan u shaqeyn: tusaale ahaan, haddii kamaradda webku aysan shaqeyn, maahan khaladka darawalka laakiin runtii kamaradda. Waxyaabo kale ayaa ah Yurub gudaheeda damaanad qaadaha wax soo saarku kaliya wuxuu soconayaa 6 bilood (haddii loo maleeyo in ciladdu tahay waxsoosaar), iyo in ka badan 6 bilood mabda 'ahaan waxaa loo qaatay inay tahay khaladka macaamilka haddii uusan caddeyn si kale ahayn Markaa haddii aad nidaamka wax ka beddesho oo qalabka qaar ka mid ahi ku jabo muddo 6 bilood gudahood ah oo aad ogtahay inay tahay dhibaato xagga qalabka ah ee aysan ahayn dhibaato xagga softiweerka ah, dammaanadda ayaa gebi ahaanba dhawrsan.
Si daacadnimo leh ayey u xiiso badan tahay inaad aragto nidaamka aad raacday si aad u soo celiso liisanka Windows-ka.
Xaaladdayda, laptop-kaygu wuxuu la yimid Windows 7 horay loo sii rakibay. Laakiin xoogaa ka dib waxaan ugu beddelay qaybinta GNU / Linux. Hagaag, si aan runta u sheego, waxaan doorbidaa distoorka aan maalin walba la shaqeeyo. Ku socota nidaamka qalliinka oo aanan isticmaalin muddo dheer.
Ku jawaab mykeura
Maqaal xiiso leh oo aad u faa'iido badan. Waxaan sidoo kale ka fekerayaa inaan iibsado laptop ASUS ah si aan dhinac uga dhigo miiskeyga. Miyaad faallo ka bixin kartaa ama qori kartaa qoraallo taxane ah oo ku saabsan waxaad haysato, waxa aad rakibtay iyo sida ay u dhaqanto? Aad ayaad u mahadsantahay.
Muhiim maahan, waxaan isticmaalaayay GNU / Linux mudo 15 sano ah shaqadayda macalin ahaana uma baahni wax badan: intel graphics card si aan iskaga ilaaliyo la macaamilka darawalada lahaanshaha ee ka socda ATI ama Nvidia, bandhigyada fasalka waxaan isticmaalaa LibreOffice Raaxo Waxaan u gudbiyaa iyaga si ay ugu soo bandhigaan PDF iyaga oo wata sheyga 'ExpandAnimations' kaas oo aan ugu daray hawl si aan u dhammeeyo khaladka (https://raw.github.com/gmolledaj/ExpandAnimations/master/dist/ExpandAnimations-0.5.oxt), hadda xitaa way ka sii wanaagsan tahay PowePoint maxaa yeelay qaabka PDF-ka ayaa ah midka ugu caamsan uguna habboon ee u dhexeeya barnaamijyada iyo noocyada. Waxaan rakibay dhamaan seddexdii dhadhan ee Ubuntu (Ubuntu iyo Kubuntu si aan u baro iyaga iyo Lubuntu maxaa yeelay hada aniga ahaan waa tan ugu fiican inaan la shaqeeyo). Waxay leedahay processor Intel ah oo ku dhammaaday U (laba koronto, oo aan ansax ku ahayn awoodda cayaaraha ama sawirrada 3D) laakiin waa i7, ma aanan jeclayn in baytarigu isku dhafan yahay (lama saari karo) waxay umuuqataa in laga sameeyay polymer sii dheeraato xitaa iyada oo aan laga saarin, waan arki doonaa. Sidoo kale in fiilada tarjumaadu ay aad u yartahay oo tarjumaha uu si toos ah ugu xirmayo fiilada (ma haysto fiilo kale oo ka soo baxda galka iyo turjubaanka, taas oo adkeyneysa isku xirkiisa hadii ay jiraan fiilooyin badan oo ku xiran).
Aniguba macalin baan ahay fasalkana waxaan ku leeyahay Lubuntu 14.04 oo ku xiran kormeeraha markasta. Waxaan isticmaalaa aRandr si aan u dheereeyo kormeeraha. Muddo dhowr sano ah, hor-joogaha-konsol-ka igama shaqeyn Lubuntu (wuxuu ku shaqeeyaa * * buntus kale iyo sidoo kale LXDE-yada kale sida PCLinuxOS). Weli ma aysan ii shaqeyn dhowr bilood ka hor, maxaa yeelay tan iyo markaas dib ugama aanan dayin, haddana ma haysto kumbuyuutarka ila socda si aan u tijaabiyo Ma ii sheegi kartaa haddii ay kuu shaqeyso? Maxaa aniga ii shaqeeya waa PDF-presenter-console, laakiin maahan LibreOffice-presenter-console.
Weli iskama aanan dayin shaashadda laba-geesoodka ah ama ballaadhiska ah, fasallada waxa horeba u jiray kombuyuutar ay la socdaan WinXP oo ku xiran borojektar. Taasi waa sababta aan u dhahayay sida ay ufiican tahay in loo badalo soo bandhigidaada wacdaraha ah PDF u eg soo bandhigid shaashad buuxda. Waxaan arki doonaa berri inaan haysto fasal haddii aan ku xidhi karo borojektar oo aan arko sida ay wax u socdaan. Waxa aad ii sheegeyso waxay umuuqdaan kuwa aan is fahmi karin gaar ahaaneed, laga yaabee inay leeyihiin kernel gaar ah tanina waa mida Ubuntu haysato, laga yaabee inay qalad tahay oo kaliya ku dhacda qaabkaaga kaarka sawirada, aniga waa Intel HD 4400. Berri baan isku dayi doonaa.
Lubuntu, shaashadda laba-geesoodka ah waxay si fiican aniga iila shaqaysaa kormeeraha labaad, iyada oo ku hawlgelinaysa barnaamijka menu-ka Preferences - Monitor Settings.
Dhibaatadu waxay tahay inay u muuqdaan kuwo isku mid ah, waxaad isku aragtaa labadaba. Haddii aad aragto in labada midkoodna uusan u muuqan wax fiican waad beddeli kartaa xallinteeda, laakiin desktop-ka ma dheereynayo.
Xalka loo dhigayo desktop-ka la dheereeyay ayaa ah in lagu rakibo barnaamijka arandr, si fiican ayey u sharxayaan waana ku hubiyey:
Waxaan sidoo kale iibsaday laptop ASUS kayar bil ka hor laakiin maadaama aan horeyba u qaatay lacagta, waxba igama gelin. Windows-ka wuxuu ku qaatay wax ka yar labo maalmood kumbuyuutarka laakiin waxaan ku taageeray Windows-ka USB-ga haddii ay dhacdo. Ma jecli inaan laba OS ku haysto kumbuyuutar isku mid ah, sidoo kale waan isku dayay iyaga taageerayaashuna way dhegeysanayeen wax badan.
Si loo sameeyo keydadka daaqadaha USB-ga, imisa GB oo xusuus ah ayaa USB u baahan yahay? Waxaan rabaa inaan ku rakibo Linux qeybta mashiinka weyn, ma jecli in labo nidaam lagu rakibo isla waqtigaas laptop-ka, haddii kale kiis wuxuu bixiyaa dhibaatooyin ... Waxaan u baahanahay inaan sameeyo keydkaas.
Ku jawaab Akhriste
Inaad ku bixiso kharash intaas le'eg iibsashada kombuyuutarka iyo soo celinta liisanka Windows si aan kuu badbaadiyo 40 ama 50 doolar, aniga iima muuqato xalka ugu macquulsan. Tan iyo markii aan sameeyay qarash intaas le'eg, waxa ugu fiican ee aan sameyn karo ayaa ah in aan qaato Windows-ka oo aan aqbalo soo rogid, inkasta oo uu diido. Waxa ugu xun oo dhami waxay yimaaddaan gadaal waana wax aan ka ahayn dhibaatooyinka ay dadka Windows-ku ku soo rogaan mashiinadooda (mashiinada qalabkooda lagu tijaabiyay kaliya iyo gaar ahaan Windows, taas oo u dhimeysa GNU / Linux) qof caadi ah oo isticmaala. hel dhammaan noocyada caqabadaha iyo dhibaatooyinka rakibidda nidaam kasta oo aad rabto kombiyuutarkaaga.
Waxaan u maleynayaa waxa ugu fiican, ugu yaraan aniga ahaan, waa inaan iibsado kombiyuutar nidaamkiisa hawlgalka, ka hor, horeyba loogu rakibay GNU / Linux oo loo yaqaan Ubuntu ama Linux kale.
Maaha wax badan oo ku saabsan in lacag la badiyo ama laga yaraado, ee waa in la dhaqan geliyo xorriyadda qofka wax iibsanaya, maxaa yeelay qofka ay tahay inuu go'aansado inuu aniga yahay, oo uusan shirkad igu soo rogin. Waxa aad ka leedahay iibsiga laptop-ka tooska ah ee loo yaqaan 'GNU / Linux' aad ayey u fiicnaan lahayd haddii taasi ka jiri lahayd Spain, haddii aad ii sheegto dukaan ku yaal Córdoba (Spain) si aan uga iibsado wax ka badan ama ka yar kan aan iibsaday, iyo nooca ay tahay si loo hubiyo in qaybo ka mid ahi u hadhsan yihiin mustaqbalka, waxaan maanka ku hayaa ta ku xigta. Waxaan filayaa in aysan jirin (ugu yaraan halkan).
Hagaag, runti maahan inaad saxan tahay, laakiin waa inaad maanka ku haysaa inaan ku noolahay nidaam hanti-goosad, halka waxa ka jira ay tahay lacag oo aan ahayn baahida isticmaalaha. Xilligan, hadda, waxaan wax ka beddelayaa kombuyuutarka wax lagu dhejiyo. Waxaan soo iibsaday dhamaan qalabka oo dhan si gooni gooni ah, markii wax walbana lagu dhejiyay sanduuq bir ah waxaan dhigay GNU / Linux oo aan doonayay halkaasna waa lagu daawanayaa waqtiga dhacaya. Waxaan naftayda siiyay raaxada, haddii raaxada, waxaan hoosta ka xariiqayaa, inaan warqadda siinayo Uncle Bill's liisanka, sababo badan awgood oo aysan mudnayn inaan faallo ka bixiyo hadda. Mustaqbalka fog ama ka fog waxaan sameyn doonaa sidaasoo kale markale.
Marka laga hadlayo laptops, wax dalab ah oo badan oo laga helo nidaamyada GNU / Linux lama raacin, laakiin waxaa jira. Waa arrin raadinta suuqa.
Waa inaadan baarin suuqa oo dhan, waa inaad raadisaa suuqa maxalliga ah, dukaamada ku yaal magaaladaada, waxaan kuu sheegayaa sababta: inta lagu jiro dammaanadda haddii ay jaban tahay cilad farsamo awgeed, Midowga Yurub waa inaad u qaadataa iibiyaha iyo iibiyaha waxaa ku waajib ah inay u geeyaan soo saaraha. Haddii aad ka iibsatid kumbuyuutarka magaalo kale ama khadka tooska ah, haddii aad u baahan tahay inaad ka faa'iideysato dammaanadda, kharashka gaadiidka ayaa adiga adigu sameyneysaa waana qaali. Taasi waa sababta aan ugu iibsado waxyaabaha qaaliga ah dukaanka. Dhamaan fekerka.
Runtii maan ka warqabin suurtagalnimada, waxaan jeclaan lahaa inaan aqriyo qibrad aan u leeyahay nin ay isku wadan yihiin (Argentina) oo leh nooc kale. Naxariis dhab ah oo aan horay u helin, tan iyo dhowr bilood ka hor waxaan iibsaday buug yar oo Asus ah 😛 Macluumaad aad u fiican 😉
Dell waa mid ka mid ah shirkadaha ugu muhiimsan ee bixiya qalabka Ubuntu ku shaqeeya, shirkadduna hadda waxay soo saartay laptop cusub oo la yiraahdo Inspiron 15 3000 Series Laptop Ubuntu Edition.
Shirkadaha sida Dell ama IBM waxay gacan ka geysteen sameynta Ubuntu in badan oo caan ah maxaa yeelay waxay iibiyaan qalab badan, waxayna ku raraan qalabkaas Ubuntu horay loo sii dhejiyay. Waxay u egtahay inaysan aheyn wax weyn. Si kastaba ha noqotee, marwalba waad rakibi kartaa wax kale, laakiin macaamiil badan ayaan u wareegin OS kale oo Ubuntu weli waa la rakibay.
Waxay kaloo caawineysaa xaqiiqda ah in Dell, in kasta oo magaceeda weyn yahay, ay weli haysato laptop aad u jaban iyo netbooks. Sababtoo ah waxay la rartaan Ubuntu oo maaha Windows qiimaha aaladda ayaa ka hooseeya, taas oo ka dhigaysa noocyadan xulasho aad u wanaagsan.
Inspiron 15 3000 maahan awood awood
Waxaa jira sabab aad u wanaagsan Inspiron 15 3000 waa laptop aad uga jaban. Qiimuhu wuxuu ka bilaabmayaa $ 250 (€ 224), laakiin wuu kordhayaa markaad bedesho qaabeynta qalabka. Hadaad uun ubaahantahay wax xafiis iyo shabakadaha internetka, kama niyad jabi doontid natiijooyinka.
Qaabeynta ugu jaban waxay soo bandhigeysaa Intel Celeron® Processor (Dual Core), 4GB RAM, iyo 500GB HDD. Dhinaca kale ee muuqaalka, waxaan leenahay Intel Pentium Processor (Quad Core), 4GB RAM, 500GB HDD, iyo labo sano oo dammaanad ah (halkii mid laga heli lahaa). Noocani wuxuu ku kacayaa $ 350 (€ 313). Waxa kale oo xusid mudan in dhammaan noocyadu la yimaadaan 15.6-inch HD (1366 x 768) Truelife LED-Backlit bandhigay.
«Si sax ah u hel waxa aad rabto Ubuntu 14.04 LTS, OS-ka caanka ah oo ay ku jiraan biraawsarka Google Chrome, shan sano oo amniga bilaashka ah iyo dayactirka dayactirka ah. Laptop-ka 'Dell Inspiron 15 3000 Series' waxaa ku qalabeysan processor-radii ugu dambeeyay ee Intel, oo leh waxqabad wax ku ool ah dhammaan howlihiina oo dhan markii aad ka socotaan webka, qorista warqad erey bixin ah, tafatirka fiidiyowga ama sameynta wada sheekaysiga webka, "ayaa lagu qoray bogga rasmiga ah.
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan taxanaha Inspiron 15 3000 waxaa laga heli karaa websaydhka.
Ku jawaab mcanthony
Subax wanaagsan gmolleda:
Khibrada aad daabacday waa mid aad u wanaagsan, in ka badan 20 maalmood ka hor waxaan soo qaatay laptop-ka “asus” oo daaqado la rakibo, sida uu sheegay iibiyaha oo leh ... soo saarayaasha ma siinayaan xirmada keydka ee “darawallada” iyo midkoodna CD-ga keydka ah ee daaqadaha, si aad uhesho daaqadaha oo dhan "Produ Key" warqad lagu dhejiyo kuma xirna qeyb jirka ka mid ah oo kombiyuutarka la arki karo, kaliya "astaamaha nooca daaqadaha" ayaa muuqda. Waa maxay sababta tan? Sida uu sheegayo iibiyaha ... waxay sheegaysaa in wadayaasha iyo daaqadaha daaqada labadaba ay horeyba u yimaadeen gudaha qalabka, taasi waa ... "keyd" ah xilligan ay qalabku fashilmaan, si fudud ayey u sameyn karaan dooro "maareeyaha" maareeyaha "oo dib u buuxi nidaamka adigoon weydiisan" SERIAL ", ku haray sida caadiga ah ee warshadda.
Waxa aad sameysay ... waa mid aad u dhib badan halkan (Spain), maadaama ay ka badan tahay 21 maalmood oo ay heshay, waxaana ka shakisanahay in qalabka dib loo celin karo. Jooji bootka aaminka ah ee UEFI, waxaan awooday inaan tijaabiyo Linux Mint Live ISO, wax walbana way socdaan, laakiin markaan tijaabinayo "adeegga isku xirka shabakada wireless" ma ogaanayo qalabka oo dhan, sidaa darteed wali waan ka gaabsanayaa inaan ku rakibo Linux qeybta ugu weyn mashiinka. Waxyaabaha xun ee ku saabsan daaqadaha ayaa ah in dhammaantood ay ku xaddidayaan isticmaalka nidaamkooda (daaqadaha) iyaga oo aan awood u lahayn inay sameeyaan qaabeyn ku filan, iyagoo kuu sheegaya in midkoodna email ama xiriiriye bog (youtube) uusan kuu oggolaanayn inaad ku furo "Firefox" iyo barnaamijyo badan oo xayeysiis ah oo ku soo arooray heerkii lagu rakibay "keydinta" mashiinka, wixii talo ah ee aad isiin karto?
In aysan la imaanin CD / DVD ayaa kafiican maxaa yeelay habkaas way fududahay in shatiga lasoo celiyo, hadii qalabku la yimaado CD / DVD-yadaas waa inaan ku dirnaa waraaqo xaqiijin ah oo aan qarashka iska saarno.
Windows 8 ma jiro wax dhejisan oo dhabarka ku yaal, markaa haddii aadan sameynin wax kayd ah oo dirawalkaaga adag uu jabo, ma awoodi doontid inaad dib u dhigto. Illaa iyo hadda, haddii aad ka soo dejiso DVD-ga Windows XP / Vista / 7 Home Premium DVD-ka rakibidda internetka, waxaad ku rakibi kartaa liisankaaga oo aad kicin kartaa. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira barnaamijyo kuu sheegaya liisanka Windows-ka lagu rakibay: produkey.
Haddii aad rabto inaad soo celiso liisanka Windows-ka, waxaa muhiim ah inaad ogtahay inaadan dhaqaajin, runti ma ahan inaad aqbasho shatiga ama aad gasho Windows-ka waqti kasta, laakiin waxaan u maleynayaa in haddii aadan dhaqaajinin qofna ogyahay. Haddii aadan dhaqaajinin oo aad rabto inaad soo celiso, isku day inaad u qorto emaylka aan ku siiyay tallaabooyinka celinta, u soo dir sawirrada nambarkaaga taxan, iibso risiit ama qaansheegad iyo xaashida dammaanadda oo sug inaad eegto waxa ay kuu sheegayaan.
Marka laga hadlayo soo celinta shatiga ama qalabka oo dhameystiran, sharciga ka jira Midowga Yurub wuxuu kaliya ku siinayaa xaqa aad ku sameyn karto muddo 7 maalmood ah, ma garanayo haddii 15 ay tahay laakiin uma maleynayo. In kasta oo ay iyaduna kuxirantahay dukaanka iyo inta aad kusoo celineyso adigoon shidin Windows-ka iyo adigoon isticmaalin (hadaad kayd ka dhigatay oo aad wax walbo u soo celisay sidii warshad).
Waad ku mahadsantahay jawaabta gmolleda.
Waxaa jira barnaamijyo kuu sheegaya rukhsadda Windows-ka lagu rakibay: produkey?
Muxuu noqon lahaa barnaamijyadaas oo aan ku jirin qalabka wax basaasa si ay u awoodaan inay ogaadaan keebaa «Furaha Furaha» ee daaqadaha 8.1? Waa iyadoo leh barnaamijyada windows 8 ... kuma muuqato daaqadaha 8.1 oo qalad kaliya ayaa muuqda.
Markii aan guriga ku sii daayay qalabka, daaqadaha horay ayaa loo howl geliyay, maadaama silsiladaha waaweyn ee ganacsiga ay dhigayaan mid ama qalab kale oo cusub oo lagu soo bandhigayo dadweynaha, sidaan horayba u sheegay, waa in ka badan 21 maalmood tan iyo markii aan soo helay qalabka oo aan ka shaki qabo. waa la celin karaa.
If .Haddii aad keyd sameysay oo aad wax walba ku soo celiso sidii warshad?
Maxaan u sameeyaa keyd? ... Haddii kombiyuutarka gudaha la yiraahdo "manager manager" istaandarka nidaamka oo wax walba loo celiyo sidii warshad, ma fahmin sababta ay ugu adkeysanayaan sameynta nuqullo badan oo keyd ah oo keyd ahaan ah.
Su'aashaydu waxay tahay, adigu ma isticmaaleysaa nidaam Linux ah sideedse ku sameysay si aad u xalliso maareynta shabakadda bilaa-waayirka ah? Haddii aad hayso talo kale, ma i siin kartaa, ma garanayo sida loo helo daaqadaha 8.1 CD-ga si loo sameeyo nadiifinta rakibaadda iyo baabi'inta inta barnaamijyada xayeysiinta lagu rakibo qaab caadi ah oo lagu yiri keydka, taasna waa ay qaban laheyd… .haddii ay dhacdo in kumbuyuutarka nidaamka linux la rakibo… ma ogaanayo qalabka aasaasiga ah.
Haddii ay leeyihiin basaasnimo iyo in kale, ma ogaan kartid haddii aysan ku siinaynin koodhka ilaha oo aad adigu isku soo ururiso (waa inay u noqotaa barnaamij bilaash ah) iyo sidoo kale waad taqaanaa sida loo akhriyo (waad ogtahay sida loo sameeyo barnaamijka) . Waxa ugu horreeya maaha inaad ka soo dejiso softonic ama bog kasta oo noocan oo kale ah, toos ugu tag horumariyeyaasha: http://www.nirsoft.net/x64_download_package.html
Ma aqaano inuu ka shaqeeyo daaqadaha 8, 7 8 haa, laakiin ma lihi daaqadaha XNUMX meelna, waan ku soo celiyey anigoon isticmaalin.
Kuu sheegi kari maayo nuqulada nuqul, qof walba wuu ogaan doonaa waxa uu haysto iyo waxa uu horey ugu haysto degel kale oo la soo guuriyey.
In Linux ah wax dhibaato ah kuma qabin wifi-kayga, waxay qaadataa markii ugu horeysay. Waa muhiim ka hor intaadan isticmaalin Linux in aad isku daydo inaad ku kabaha la pendrive qaab toos ah si aad u tijaabiso haddii qalabkaaga oo dhan uu shaqeynayo (ugu yaraan kuwa muhiimka ah sida codka, sawirada iyo wifi).
On Windows 8 CD, weydii Microsoft, waa inay kaa soo qayb galaan ka dib markay kugu soo dalacaan 42 euro, waxba kama haysto Windows 8. On Linux, waxa ugu horeeya waa in lagu kabo qaab toos ah, adigoon rakibin, markaa waad ogaan kartaa haddii qalabkaaga oo dhan wuxuu shaqeeyaa kahor tirtirka daaqadaha. Waxa kale oo aad ka yarayn kartaa qaybta Windows-ka Windows lafteeda (weydii Microsoft in aanan aqoon) oo aad ku rakibto Linux laba qaab. Hal talo ayaa ah in rakibaadda uu fulinayo qof aad taqaanid oo wax ka yaqaan qormooyinka iyo kuwa kale maxaa yeelay waad tirtiri kartaa dhammaan macluumaadka oo waxaad lumin kartaa dariishadaha gebi ahaanba
Hagaag, sidaad nasiib uguhesho xaaladaas, waxaan weydiinayay dhowr bixiyeyaal wadankeyga runtiina waxay tahay, QOFKASTA wuxuu ii sheegay inaysan wax dhib ah kujirin rakibida Linux maadaama aysan aheyn burcad badeed LAAKIIN waxay ii sheegeen in sababo damaanad leh Bixiyaha haddii aan doonayo inuu I caawiyo, waxay ahayd inaan raaco NIDAAMKA HAWLGALKA HORTA LOO DHIGAY mana noqon karo mid kale. Sida waddankayga kuma iibiyaan laptop-yada guud iyo kuwa la aqoonsan yahayba si fiican, horeba way u ogyihiin dacwadda, ma lihi ikhtiyaar aan ka yeesho ama in aan haysto laba bootood ama aan khatar geliyo oo aan wax walba ka qaado oo aan waayiyo dammaanadda hawsha; Waan arki doonaa waxa aan sameeyo marka xaaladdu mar kale soo baxdo
(waan ka xumahay qafisyada, waxaan doonayay inaan xoojiyo arrinta)
Alaab-qeybiyeyaashu ma caawiyaan, waxay u hoggaansamaan sharciyada dammaanadda. Haddii qalabkaaga ka jajaban yahay warshadda, iyadoon loo eegin nooca software aad haysato, waa inay hagaajiyaan qalabka. Haddii DVD player-ka ama Memory-gayga RAM uu ku burburo dammiin ahaan, ka dib ayaan ka saarayaa diskiga adag oo kumbuyuutarka ayaa la hagaajinayaa, waxaan dhihi karaa in diskiga uu leeyahay xog shaqsiyadeed oo aanan ugu talagalin inaan la wadaago xaqna aan u leeyahay gaar ahaanshahayga. Arrin la dejiyey, wax fikrad ah kama hayaan waxa aan ku haysto qashinkayga. Sikastaba, hadaad siisid saxanka hubaal way masaxayaan, marka waxaa fiican inaadan siinin iyaga.
Kaliya waad ku mahadsantahay tixraacida qoraalkayga sida ilaha maqaalkaaga.
Salaan, mahadsanid, iyo hambalyo inaad sidoo kale ku guuleysatay 'dagaalkan'.
Waad ku mahadsan tahay, waxaan kugu leeyahay cabitaan ah inaad siiso wadada shirkadda ee lacagta ku soo celisa iyada oo aan dhibaato weyn.
Salaan Waxaan codsaday dib u soo celinta shatiga, sidaada oo kale, laakiin waxay igu yiraahdaan xarunta wicitaanka waa inaan marka hore hawlgeliyaa winodws-ka oo aan ka qaadaa shaashadda shaashadayda si aan ugu diro iyaga.
Tani caadi ma noqon kartaa?
Waan aqriyay maqaalkaaga iyo kuwa kaleba isla mowduucaas, qofna lama weydiinayo inuu aqbalo shati AAN iyagu rabin.
Waxay si sax ah iigu sheegeen tan.
Waxaan kugu wargalineynaa inaad haysato 30 maalmood laga bilaabo taariikhda iibsiga si aad u codsato soo celinta shatiga iyo in nidaamka hawlgalka la hawlgelinayo.
Waxaad u baahan doontaa inaad noo soo dirto sawirka fure u ah Nidaamyada Nidaamka Nidaamka iyo sawir lambarka taxanaha ah ee ku qoran shahaadada dammaanadda.
Waxaan ku rakibay SSD disk Ubuntu wax walbana waxay ka yimaadaan hooyada.
Laakiin hadda si aad u furto diskiga mar labaad, dhig midka asalka ah, dhaqaajiso daaqadaha, iwm. Waa xanuun qoorta ku jira, maxaa yeelay laptop-kan ayaa ka mid ah kuwa ay tahay inaad kala furfurto wax kasta oo aad ku heli karto diskiga.
Xitaa ha ka fikirin inaad dhaqaajiso, illaa intaad aqbasho, soo celin meysid.
Ha wicin taleefanka, qaar badan oo ka mid ah kuwa taleefanka ku jira wax fikrad ah malahan oo wey kugu qasaan, maaddaama aysan jirin wax qoraal ah markaa way dhaqdaan gacmahooda. Oo xitaa haddii aan la dhaqin, markaa ma jiro qof wax soo celiya.
Si toos ah wax ugu qor sida aan ku idhaahdo maqaalka (khaladaadka higaada ee laxiriira la'aanta tirada awgeed waxay ka imanayaan boostada Asus ee aan koobiyeeyo una dhajiyo sida ay tahay):
Xaqiiqdii geedi socodka soo celinta shatiga oo dhan waxaa toos loogu bilaabi karaa iyadoo la raacayo tilmaamahan:
Macaamiil qaali ah, soo celinta liisanka Windows, waxaan kaa dooneynaa inaad noo soo dirto emaylka: acib_calcenter2@asus.com(ku muuji mawduuca emaylka lambarka taxanaha ah ee qalabkaaga):
Haddiiba ay dhacdo, u dir sawirrada iyo emaylka wax ka yar 7 maalmood maxaa yeelay taasi waa muddada soo noqoshada sida uu qabo sharciga. 30-ka maalmood ee soo-celinta waxay durba ku tiirsan tahay shirkad kasta, ha aaminin, ku samee 7 maalmood ugu badnaan haddii ay dhacdo.
Waan dhaqaajiyay mabda 'ahaanna waa inay lacagta galaan oo kaliya, waxaan qoray emayl waana wacay daaqadaha 8na waa wadada kaliya maadaama aysan laheyn warqad lagu dhejiyo.
Waxaan sidoo kale soo celiyey Windows 8, maahan inaan aqbalo wax ruqsad ah waxaanan si fudud ku diray sawirada aan kaga faalooday maqaalka, warqada damaanada iyo dhabarka kumbuyuutarka. Hadda waxaad in badan ku jirtaa gacmahooda maxaa yeelay waxaad ogolaatay liisanka, laakiin haddii ay horeyba kuugu soo direen tilmaamo ku noqoshada boostada maxaa yeelay waxaad heysataa caddeyn waana sii wadi doonaa inaan ku sugo, xagaaga howlaha shirkadaha oo dhan waa gaabis yihiin, qiyaasi in aan ka hadlayno lacag mana ahan wax la yaab leh haddii qof cayiman uu yahay kan saxiixa saxiixa iyo haddii uu tagayo fasax, markaa waxa macquul ah ayaa ah inay kugu qaadanayso bil dheeri ah: wadar ahaan 1 bil iyo 1 toddobaad. , iyo in ka badan maxaa yeelay shaqada bishaas ayaa sii kordheysa ka dibna waa inaad si tartiib tartiib ah u siisaa isla jadwalka shaqada. Dulqaad. Isku soo wada duuboo, inta aad kombuyuutarkaaga ku haysatid laynis iyo socod.
Weli waxaan 42-ka euro ka sugayaa ASUS, waxay iga dhigeen inaan qaato liisanka waxayna umuuqataa inaysan ku degdegin, laakiin uguyaraan waxay ii sheegeen in wax waliba sax yihiin
Aakhirkii ma aqbalin liisanka. Waxaan saaray gees waxayna ii soo direen labada foom. Waxaan u diray iyaga maalinta ku xigta, iyo hadda…. sugaya. Waxaan u maleynayaa inay ka badneyd 3 toddobaad mana aysan soo celin lacagtaydii.
Waan arki doonaa sida tan ku dhammaato.
Ma jiro gees, maxaa yeelay waxaad ku jirtaa gacmahooda taasna waxba kama tareyso. Waxa ugu fiican ayaa ah inaad si cad u sharaxdo waxaad rabto inaad sameyso, iyadoo lagu saleynayo qawaaniinta hada jira u sheeg inaadan waajib kugu ahayn inaad aqbasho shuruudaha Microsoft ee ku saabsan iibsashada kumbuyuutarka, iyo in aadan rabin sheyga MS Windows waana sababta aad u soo celineyso. , halkaasna waxaad u sheegaysaa in sida ku xusan qodobka 1 ee sharciga tartanka ay sharci darro tahay iyaga inay kaa dhigaan inaad iibsato alaab cayiman adigoon suurtagal ahayn inaad ku soo celiso si aad u dhigto mid ka duwan. Oo tan iyo markii waxaas oo dhan lagu sameeyo gudaha 7 maalmood gudahood markii la iibsaday, haddii kale waxaad ku soo celinaysaa laptop-ka oo dhammaystiran dukaanka.
Mar alla markii aad hesho emaylka foomamka la buuxiyo, waxaad horey u haysatay caddeyn aqbalitaan celinta oo si fudud ayaad ugu sii wadaysaa habraacyada. Waa wax iska caadi ah in xagaaga wax walba dib loo dhigo wax badan, taasi waxay ka dhacdaa shirkadaha oo dhan sababo la xiriira fasaxyada bil dhan oo shaqaalahooda ah.
Aakhirkiina waxay i siiyeen lacagtii Jimcaha. Waxa dhacaya waa taas ama waxaan eegay koonto kale mana aanan dareemin inaan fiiriyo midka aan ku qoray foomka.
Waa inaan sheegaa inaan aad ugu faraxsanahay ASUS arintan anigoo diin ku dhaqmaya heerarka EU.
Taasi waa, haddii laptop-ka uusan aniga wax badan igu qancinaynin ... batteriga ayaa isku dhafan oo aad u yar, qiyaastii 3 saacadood. Si aad uga saarto drive-ka adag waa inaad kala furfurtaa wax walba, tanina aad bay ii dhibaysaa. Dulkeygii hore ee 'DLL', kaliya ka fujinta daboolka ayaa si toos ah banaanka ugu saaray darawalka adag.
Waxaan hayaa Ubuntu 15.04 oo la rakibay runtiina waxay tahay in wax waliba hagaagsan yihiin.
Ma jiraan wax dhibaato ah oo ku saabsan BIOS. Dabcan, ma jecli xaqiiqda ah in OS ku dhex jiro BIOS.
Waan helay gees, maxaa yeelay waxaan u sheegay in macluumaadka ay i siiyeen uu yahay mid is burinaya. Waxaan sidoo kale haystay 8.1, waxayna iga codsadeen inaan ruqsad u kiciyo. Si adag ayaan u diiday, waxaan sharaxay waxa aan isticmaali doono, Ubuntu, waxaanan ka codsaday inay fadlan ii soo diraan foomamka ay u direen isticmaaleyaasha kale si ay lacag uga helaan.
Iyagu ima aysan sharixin taas sababtoo ah waxay ahayd w 8.1 waa inaan dhaqaajiyaa oo aan ku jirin dadka kale. Ugu dambeyntiina waan diiday, waan buuxiyay foomamka, waana diray waana la ii soo celiyay.
Waxaan rajeynayaa in isticmaalaha qaatay rukhsadda uu isna dib u heli doono.
Maanta waxaan qaabeynayaa diskka asalka ah waana arki doonaa hadii aan iibiyo ama aan u keydiyo keyd ahaan, maxaa yeelay waxaan isticmaalaa kaliya SSD.
Auqneu kiiskeyga si aan uga saaro saxanka waxaan lumiyay damaanad qaadka. Waan ogahay. Laakiin waxaan door bidaa inaan khatarta qaato oo aan yeesho SSD intii aan isticmaali lahaa HD. Tan iyo markii aan isku dayay cajaladahaan, mar dambe ma isticmaalo mid kale.
Salaan iyo mahadsanid tilmaamaha
Roberto?, Maxaad u isticmaashaa kaarka xusuusta SDD…. Halkii laga heli lahaa HDD?, Midkoodna ma fahmin, raali iga noqo jaahil, waxaad leedahay waxaad haysataa laptop Asus ah, oo aad ka saartay Hard Drive-ka badalkiisana waxaad isticmaaleysaa SDD.
Waa maxay faa iidooyinka iyo khasaarooyinka SDD uu la barbar dhigay HDD Sidee ayaad ugu xirtay qalabka ama ma u isticmaashay aalad kale oo dibedda ah oo aan ka ahayn kombuyuutarka?
Sidee ayey kuugu qasbeen inaad ogolaato shatiga? Taasi ma noqon karto, taxaddar maxaa yeelay shirkadaha oo dhan waxay shaqaaleeyaan dad aan wax fikrad ah ka haysan inay siiyaan mushaharka ugu yar ama ka yar. Waligaa ha aqbalin liisanka, wey ka badnaan laheyd. Sikastaba xaalku ha ahaadee, sharciga ayaa kuu ogolaanaya inaad ku soo celiso badeecada 7 maalmood gudahood markii aad iibsatay.
Sikastaba xaalku ha ahaadee, ka fikir in ay igu qaadatay 3 wiig bishii May, hada shirkadaha oo dhami waxay leeyihiin shaqaale aad uyar maxaa yeelay waa inay ku wareegaan xagaaga fasaxa xagaaga, markaa waxay caqli gal noqonaysaa inay kugu qaadanayso laba jeer intii badh shaqaalaha waxay ahayd inay xagaaga ku qaataan Julaay iyo badhka kale bisha Ogos, ama ka yar haddii ay isku bedbeddelaan inta u dhexeysa Juun 15 iyo Sebtember 15 illaa 3 bilood.
Ma aanan jeclayn gabi ahaan sida ay gacanta ugu xirantahay Microsoft macaamiishiisa iyada oo leh warshad horay loo rakibay windows windows 8.1 OEM 64-bit in Asus, waxay xaddidayaan wax walba isticmaalka gaarka ah ee daaqadaha, dusheedana waxay ku buuxinayaan xayeysiin, badan Bogagga laalaada maxaa yeelay ma haystaan ​​shahaadada amniga.
Bil iyo badh kadib waxaan wacay soo saaraha si uu iigu soo celiyo qiimaha liisanka daaqadaha, waxayna igu yiraahdeen waan sameyn karaa ilaa 30 maalmood, mudadaas wixii ka dambeeya waxba ma qaban karaan, tonce waxaan iri nuqul isii ama macluumaadka la soo saaray ee 'licKey' ee liisanka daaqadaha (kuma imaaneyso qeyb kamida jirka kumbuyuutarka) waxayna yiraahdeen waxba kama oga, in si kasta oo loo yiraahdo "fure" waxaa si aan kala sooc laheyn loogu dhejiyay wadaagista UEFI / BIOS macluumaad la motherboard ... disk adag iyo isla nidaamka. Sidoo kale wax ka ogow dammaanadda, oo waxay yiraahdeen dammaanaddu waxay dabooleysaa oo keliya sida ay u direen softiweerka la rakibay iyo cillad kasta oo farsamo (laakiin waa in la bixiyaa), haddii kale waxba ma aysan daboolin haddii ay dhacdo in qalabka lagu xadgudbay ama cillado sida nidaam kale oo ku jira laptop-ka. Yaa daaqadaha daaqadeeyay Laptop-kani wuxuu taagnaa goobta lagu soo bandhigo dukaanka ganacsiga, maadaama ay ii sheegeen inaanu hadhin wax dambe, tonce waxaan idhi waxay lumiyeen qalabkii lagu ogaan lahaa xaalada ay tahay, waxaan filayaa inay daqiiqadaas bilaabeen daaqadaha »Maxaa yeelay markaan guriga imid oo aan daaray kombiyuutarka, daaqadaha ayaa horay loo howlgeliyay.
Dhowr bilood oo cilmi baaris ah kadib, oo aan qatar galiyay damaanad qaadka, waxaan go aansaday inaan isku dayo Linux Mint oo leh UEFI boot boot oo u suurta galiyay asal ahaan, sameynta rakibid nadiif ah oo hal nidaam ah iyo qaabeynta dhamaan qalabka adag, waxay u shaqeysay sidii soo jiidasho.
Ku jawaab gerop
Ciise Maria Berrueta dijo
Waxaan jeclaan lahaa inaan ka faalloodo in lacag celin uun la i siiyay maalmo ka hor (Diisambar 2015) laptop ASUS ah oo leh daaqado 8.1, waxayna iga codsadeen inaan dhaqaajiyo. Taasi waa, aqbal shuruudaha liisanka ka dibna ka hawlgeli daaqadaha internetka. Sharaxaadda ay i siiyeen ayaa ah in tani ay lagama maarmaan tahay in la helo "fure" Windows ah, maadaama hadda aysan muhiim ahayn in la diro istiikarka ama tilmaame kale oo jireed, maaddaama furaha sheyga uu ku dhex jiro BIOS-ka kumbuyuutarka.
Kadib markaan buuxiyo labada foom ee email ahaan la iigu soo diray, waxaan ku helay 42 euro maalmo gudahood. A 10 ee ASUS arrintan la xiriira.
Jawaab Jesús María Berrueta
Iyagu ima aysan weydiinin, laakiin haddii ay sidaas tahay faallo inaad ka heli karto furahan adiga oo ka soo kicinaya GNU / Linux Live USB ama CD adoo amarka soo socda ka soo diraya terminaalka:
sudo cat / sys / firmware / acpi / miisaska / MSDM
Waxaad ku heli laheyd furaha qaabkan halka YYYY… ay yihiin furaha wax soo saarka aad raadineyso:
MSDMUM_ASUS_Buuga xusuus qorASUSAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAA
Ma uusan xusuusan meesha uu amarka ka keenay, laakiin dib u raadinta isha waa http://www.sysadmit.com/2015/07/windows-uefi-bios-ver-clave-guardada.html waxayna bixiyaan amarro kale oo ay ku arkaan:
sudo xxd / sys / firmware / acpi / miisaska / MSDM
sudo hd / sys / firmware / acpi / miisaska / MSDM
Dhammaantood si fiican ayey aniga ila shaqeeyeen laakiin labada labaad ayaa ka fiicnaaday maxaa yeelay midka hore xarafka ugu horreeya ee ereyga sirta ah ayaa lagu daboolay dabeecad qariib ah.
Gedit wuxuu isu beddelaa IDE